Ipateni, yenza iipateni kwaye ufumane ikhowudi yakho yeCSS yoyilo lwewebhu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lua louro | | Uyilo lwewebhu, Izibonelelo
Kulo uyilo lwewebhu Ngamanye amaxesha sifuna ukufaka into engaphezulu kwemibala ecacileyo ngasemva: sifuna ukwenziwa. Akukho lula kakhulu ukufumana ifayile ye- shicilela Sijonge kwaye ngenxa yoko izisombululo ezinje ngale sizinikiweyo Ipateni Siyabathanda.
Namhlanje siza kuthetha nawe malunga nephepha lewebhu elisebenza njenge umvelisi wesitampu onamandla. Unokuthi yonke into iyenzeka ngokwezifiso, kodwa kuhlala kufanelekile ukuba uzihlole ngokwakho ngokungena kule ndawo.
Nangona unokuba madolw 'anzima kuwo onke amaphepha abhalwe ngesiNgesi (kwaye siyakuxelela ukusukela ngoku ukuba ungabathiyi, kuba banokuba ngumthombo wolwazi), akufuneki ubenayo nengxaki encinci yokubanakho ukuphatha kubo ngonxibelelwano lwe iwebhusayithi yePatizerizer.
Isithuba esenziwe ngokungagqibekanga, esibizwa ngokuba yi-SETTINGS, sibonisa amaxabiso anokubakho ojikelezayo (ujikelezo), umbala, iPlaid (into enje ngesiphumo se shicilela IScotland), i-opacity (i-opacity), ububanzi (ububanzi), isithuba (isithuba), iseti. Ngaphantsi kwale thebhu, sinenye ebizwa ngokuba yi-STRIPES, apho amaqela amabini anemibala avela ngokungagqibekanga (ipinki enye kunye neblue).
Ukuba ubeka ingqalelo, kwi-STRIPES uya kuba nomgca opinki okhethwe ngokungagqibekanga. Ukuba ucofa kwibhendi eluhlaza okwesibhakabhaka, uya kuba nakho ukuguqula iiparameter ezihambelanayo. Ukuba into oyifunayo kukususa omnye wale migca (okanye zombini), kuya kufuneka ucofe u-X ovela kwikona ephezulu ngasekhohlo.
Nje ukuba zonke iiparameter ocinga ukuba kufanelekile, lixesha lokuba ufumane ikhowudi yesitampu ukuyifaka kwiwebhusayithi yakho. Fikelela kwi-CODE tab, ebekwe ecaleni kwe-SETTINGS, kunye… voilà! Sele unekhowudi ye-css Yepateni yakho elula.
Kwithebhu ecaleni kwe-STRIPES, ebizwa ngokuba LIBRARY, sinokufumana ezinye iipateni esele zenziwe (esinokuthi sizisebenzise).
Ipateni Ikwasinika ithuba lokuba sabelane ngendalo yethu ngothungelwano lwe-Facebook kunye ne-Twitter. Oko, kunye nemisebenzi ecace gca njengo-SAVE, DUPLICATE.
Nokuba uyayithanda le webhusayithi okanye hayi, kunokwenzeka ukuba unomdla wokwazi abanye 5 kwiijenreyitha zokwenza imifanekiso engasemva.
Iinkcukacha ezithe xaxe - 5 kwiijenreyitha zokwenza imifanekiso engasemva
Imvelaphi Iwebhu esemthethweni
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Ipateni, umvelisi wepateni uyilo lwewebhu
Iibhanki zemifanekiso emihlanu yasimahla oza kuyisebenzisa